Galgala hardhaa Muddee 28 Barattoonni Yunversity Dirre Dhawaa guutun Moora keessa akka bahan taasifamaniiru. | Kichuu
Humni poolisi feederaalaa amma sa’ati 12:00PM irra eegalani dormii hundarra deemuun moora gad lakkisaa jedhanii dirqiin barataa moora Yuunvarsiitii keessa baasaatti jiru . uummanni naannoo moora kana jirtan uummanni Oromoo Nu qaqaba nu simadha, Lubbuun keenya yaddoo guddaa keessa jirti. Birmaadhafi Nu birmadhaa jedhu Ijoolleen Keessaan Ilmaan Oromoo Yuunvarsiitii Dirree Dhawaa .
Woraani Fedeerala wanta moora kana keessatti amma booda tahuuf itti gaafatamummaa hin fudhadhu jechu isaattin barattoonni Hawaassat makamaaru. Perezidaantin Yunversitichas baratootta dubbisuuf haayamamma hin ture. Haali jiru hedduu sodaachisaaf yaadesaadha. Guyyaa hardhaa barataan Oromoo tokko ajeefamuun ni yaadatamma .Yaa Oromoo Dirree Dhawaa Ilmaan teessan karaa irrakaasa bulfdha. Duruu jaalalan issin beekna. Ijoollee teenya Garee Saatanawin nyaadhamu irraa nuuf olcha.
#PROFESSOR_MOHAMMED_HASEN, haqa tokko dubbatanii Turan.
“Waggaa kudhan dura biyya alaatti walgahii tokkoo Kan BIRHAANUU NAGGAATTIN taasiisamaa turettii , maqaadhaaf qofa na yaamanii afeeramee ture. Anis carraa argadhee Waayee Saba kootiif, duubatti hafummaan Saba habashaa, rakkoolee biyya sanaaf dhale niin dubbadha jedheen deemee , carraa dubbachuu naaf laachuu dhabanis marii isaanii irratti qooda fudhadhee ture.
Marichaa keessattii Waayee naannoof sabummaa ilaalchisee, ‘ naannoo jechuun warroota Wal ijaaree, naannummaan dhaadatuu kana bittineessuun hojii salphaa fii tarsiimoo yeroo gabaabaattii ittiin milkoofnuu qopheefannee Kan harkaa qabnuudha, kanaaf kuni daqiiqaa takkaafillee ta’u isin yaaddeessuu hin qabu, jedhee Jala sararee isiiniif himuu danda’a.’ jechuun haala ittiin caccabsuu danda’uun Wal tajjii Sana irratti baldhinaan ibsuu irraa of qusatee, maricha golaabe.”
Tarsiimoon hawwiifii qabsoon HABASHAANOTAA , NAANNOO OROMIYAAF SABA OROMOO lafa kanarraa balleesuu ta’ee hundii isaaniis irratti waliif galanii Wal tumsaa geggeefatan kunhoo hojiitti hiikkataa jiran.
Adeemsi Kunis, Gama NAANNOO OROMIYAA daangeessan hundaanuu, lafa bakka tokkootti oromiyaa jedhamee yaamamu, kana itti achi seenanii ciruun bittineessuuf , kunhoo tokkoo jedhanii eegalanii jiru.
Kana immoo sadarkaa ol aanaattii moottummaa biyya bulchaa jiruun Kan deeggaramee hojjatamaa jiruudha.